Isi na peeji nke: United Alaeze mgbapu — HunterThinks.com
UK n'ókè Agency mere egwu aghara ahụ siri oké ike na m dị njikere ime ihe ọ bụla iji kwụsị m ịtụ mkpọrọ
The UK n'ókè Agency mere ka m nwere egwu aghara na ahụ siri oké ike na m ịma banyere m mgbapu ngwa ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ karịa ndiwọrọ njide na ịkwụsị egwu ọgụ.
Akwukwo ozi edeputara na UK Border Agency banyere onodu ogwu ahu ike adighi edozi
Enwere m ike gwụrụ n'ihi mwakpo ụjọ n'ihi mkpịsị iwu mkpesa m na-akwadoghị nke na enweghị m ike gụchaa akwụkwọ ozi.
Ọ bụ mkpesa na ndị otu na-ahụ maka nlekota onwe ha gbasara Blọ Ọrụ UK Border na Geo Group na-ajụ ịgwọ ọnọdụ ahụike m
Gọọmentị jụrụ ịgwọ ọrịa m na ezighi ezi na m nwara inweta enyemaka site na IMB–ọ dara.
United Kingdom Home Office, Agencylọ Border, Zọ mgbapu n'okpuru Fast Track na arịrịọ na-anaghị akwụ ụgwọ
Akwụkwọ ahụ gọọmentị UK nyere m mgbe ha gwara m na ha agaghị eji nhọrọ Certify Refused nke Fast Track rụọ ọrụ.
Ike agwụla m
Anụmanụ anụmanụ nwere ike ịpụta nke ọma.
Ebili nke nsogbu ụjọ ahụ
Ọrịa m ụjọ yiri ihe siri ike nke na ọ ga - agbari ọbụna ọrịa mwepụ nke serotonin.
Ọ bụrụ na ogwe aka m gbajiri agbaji, ị ga-enyere m aka ibu ihe
Ọnọdụ ahụike m–ịda mbà n'obi, generalized nchegbu aghara, ọghọm nrụgide post-traumatic, na egwu aghara–gbochie m ịrụ ọrụ ụfọdụ m ga - enwe ike ịrụ ma ọ bụrụ na ahụ siri m ike. N’ime ọtụtụ ihe m na-enweghị ike ịrụzu, ma ọ bụrụ na enwere m aka ịmezu otu n’ime ha, Amalitere m inweta ego ọzọ ozugbo. Ndị ọzọ agaghị enyere m aka ka ndụ m ghara isi ike.
A obere dose of alprazolam na m ka mma
N'ihi agha nke ọgwụ na n'ihi na anyị na-egbo mkpa nlekọta ahụike nke ndị ogbenye, Enweghị m ike inweta ọgwụ m chọrọ. Mgbe m nwetasịrị ọgwụ ọzọ m chọrọ, Mmetụta dị mma na ndụ m bụ ozugbo ma ihe ịtụnanya.
Ọganiihu na mgbochi
Ihe dị mma karịa izu ole na ole gara aga na ọnwa ole na ole gara aga. Isi ihe kpatara ihe dị mma bụ na enwere m enyemaka karịa.
Ọnwa atọ nke ọgba aghara, mana ụfọdụ nwere nchekwube maka ọdịnihu
Anwara m ụfọdụ ihe ndị mmadụ tụrụ aro, Anagidere m ahụmịị ahụ kachasị mgbu na ndụ m ruo taa, mana ikekwe ihe ga-aka mma ugbu a.